အာရုံခံကိရိယာကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ရန်အချက် ၅ ချက်
သိကောင်းစရာ ၁ - Bus tool နှင့်စတင်ပါ။ ပထမအဆင့်တွင်အင်ဂျင်နီယာသည်မသိသောနေရာကိုကန့်သတ်ရန်ဘတ်စ်ကားကိရိယာတစ်ခုဖြင့်အာရုံခံကိရိယာသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ ဘတ်စ်ကားကိရိယာတစ်ခုသည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ (PC) ကိုအာရုံခံကိရိယာ၏ I2C, SPI သို့မဟုတ်အခြားပရိုတိုကောနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
အာရုံခံကိရိယာအမြောက်အများသည်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်နှင့်လူတို့၏ဘ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာပြီးကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းတွင်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးပေးသည်။ ဤစျေးနှုန်းသက်သာသည့်အာရုံခံကိရိယာများသည်အင်တာနက်အရာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တွန်းအားဖြစ်သည် (IoT) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
အာရုံခံကိရိယာထိခိုက်လွယ်မှု Sensitivity သည် output fi y ပြောင်းလဲမှုအချိုးအစားကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် sensor ၏တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအောက်ရှိ input Δ x ၏ပြောင်းလဲမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာ output-input ကိုဝိသေသကွေး၏ဆင်ခြေလျှောဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံကိရိယာ၏အကြား linear ကြားဆက်ဆံရေးရှိပါက Sensitivity S သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်သည်။
Sensor linearity ပုံမှန်အားဖြင့် sensor ၏အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်သောဝိသေသလက္ခဏာများသည်ဖြောင့်သောမျဉ်းတစ်ခုထက် bar curve ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အလုပ်တွင်မီတာကိုညီမျှသောအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအထိဖတ်နိုင်ရန်အတွက်အမှန်တကယ်ပင်ကိုကွေးကွေးနှင့်မျဉ်းကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုရန်လျောက်ပတ်သောဖြောင့်သောမျဉ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။
အာရုံခံဒိုင်းနမစ်ဒိုင်နမစ်ဒိုင်နမစ်အနေဖြင့်သွင်းအားစုပြောင်းလဲသည့်အခါပြောင်းလဲနေသောဝိသေသလက္ခဏာဟုခေါ်သောအရာသည်အာရုံခံ၏ output ၏ဝိသေသကိုရည်ညွှန်းသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ အာရုံခံကိရိယာတစ်ခု၏ dynamic ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစံသတ်မှတ်ထားသော input အချက်အလက်များအား၎င်း၏တုန့်ပြန်မှုအရဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ sensorR ...
အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာ၏တည်ငြိမ်သောဝိသေသလက္ခဏာများအာရုံခံ၏ငြိမ်ဝိသေသလက္ခဏာများသည်ငြိမ် input ကို signal ကို, အာရုံခံ၏ output နှင့် input ကိုမှဆက်စပ်နေကြသည်။ သွင်းအားစုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုသည်ဤအချိန်တွင်အချိန်နှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုဖြစ်သော ...
အာရုံခံစနစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမျက်မှောက်ခေတ်တွင်အာရုံခံကိရိယာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်းမရှိသေးသော်လည်းအောက်ပါအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၁။ အာရုံခံကိရိယာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေအတွက်အရရွေ့လျားခြင်း၊ အင်အား၊ အမြန်နှုန်း၊ အပူချိန်စသည့်အာရုံခံကိရိယာများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ စီးဆင်းမှုနှင့်ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းမှု ....
Sensor ၏အခြေခံသင်ခန်းစာဆိုင်ရာအသိပညာ Sensor နှင့်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် National Standard GB7665-87 သည် sensor ကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည် -“ ပုံမှန်အားဖြင့်အထိခိုက်မခံသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစည်းမျဉ်းတစ်ခုအရအသုံး ၀ င်သောအချက်ပြသို့ ပြောင်းလဲ၍ အသုံးပြုနိုင်သောကိရိယာသို့မဟုတ်စက်တစ်ခု” ။ အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု detect ဖြစ်ပါတယ် ...
၂၆။ အခ်ါနှုန်း resistance ခုခံမှုမရှိသည့်အခါအာရုံခံ၏လွတ်လပ်မှု (ပြင်ပအင်အားမရှိ) နှုန်းသည်လှုပ်ခတ်သွားသည်။ ၂၇။ တုံ့ပြန်မှုထွက်ရှိသည့်အချိန်တွင်တိုင်းတာ။ ပြောင်းလဲသောစရိုက်လက္ခဏာ။ ၂၈။ လျော်ကြေးပေးသည့်အပူချိန်အကွာအဝေးကိုအာရုံခံကိရိယာမှအပူချိန်အကွာအဝေးကိုနှိုင်းယှဉ်ခွင့်ပြုသည်။
၂၀။ Sensitivity drift sensitivity ပြောင်းလဲမှုကြောင့် calibration curve ၏ slope မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခု။ ၂၁။ Thermal sensitivity drift sensitivity ပြောင်းလဲမှုကြောင့် Sensitivity drift သည်။ ၂၂ အပူသုညပျံ့နှံ့မှုပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်သုညပျံ့နှံ့မှု။ ၂၃။ Linearity ဒီဂရီဘယ် ...
မြို့ပြအခြေအနေများအောက်တွင် ၁၄။ သုညထွက်ရှိမှုအာရုံခံကိရိယာ၏ output ကိုသုညအဖြစ်တိုင်းတာသည်။ 15. Lag တိုင်းတာတန်ဖိုးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးကျော်လျော့ကျအဖြစ် output ကိုအတွက်ဖြစ်ပေါ်သောအများဆုံးခြားနားချက်။ 16. နှောင်းပိုင်း output ကို signal ကိုဆွေမျိုး t ကိုပြောင်းလဲမှု၏အချိန်နှောင့်နှေး ...
၈။ သုညအနေအထားထုတ်လုပ်မှု၏ပကတိတန်ဖိုးကိုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်သောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သော equilibrium state ။ ၉။ Incentive ပြင်ပစွမ်းအင် (ဗို့အားသို့မဟုတ်လက်ရှိ) သည်အာရုံခံစနစ်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်စေရန်အသုံးပြုသည်။ ၁၀။ အများဆုံးမက်လုံးပေးနိုင်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဗို့အားသို့မဟုတ် current ၏အများဆုံးတန်ဖိုး ...
ခန်းမအကျိုးသက်ရောက်မှုလက်ရှိအာရုံခံ, ခန်းမလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာ, ခန်းမ Effect Ac လက်ရှိအာရုံခံ, ဗို့အားလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာ, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု DC လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာ, မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို ac လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာ,